Guddoomiyaha Aqalka Sare ee dalka oo la kulmay Xildhibaanno ka yimid Turkiga | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Aqalka Sare ee dalka oo la kulmay Xildhibaanno ka yimid Turkiga
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee dalka oo la kulmay Xildhibaanno ka yimid Turkiga
Muqdisho(SONNA)-Guddoonka Aqalka Sare ee Dalka ayaa maanta la kulmay wefdi ka socda Baarlamaanka dalka Turkiga, iyagoo ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ka dhexeeya iyo sida loo xoojin lahaa.
Xoghayaha Guud ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlaamanka Cali Maxamed Jaamac ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid looga hadlayay xoojinta xiriirka labada Baarlamaan.
“Guddoomiyaha Aqalka sare iyo wafdi la socday waxa ay tegeen xarunta Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya oo ay kula kulmeen wafdi Xildhibaanno ah oo ka yimid dalka Turkiga iyo safiirka Turkiga ee Soomaaliya, iyadoo kulanka looga hadlay xoojinta taageerada iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal, kaasi oo ku soo dhamaaday guul iyo isfaham” ayuu yiri Cali.
Xoghayaha Guud ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlaamanka Cali Maxamed Jaamac ayaa xusay in Xildhibaanada ka yimid dalka Turkiga ay Guddoomiyaha Aqalka Sare u soo gudbiyeen mahadcelin, waxaana ay ka codsadeen in wafdiga uu hogaaminayo Guddoomiyaha ay booqasho ku tagaan Dalka Turkiga.
“Guddoomiyaha ayay u soo gudbiyeen casuumaad ku aadan in isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay soo booqdaan Dalka Turkiga, Guddoomiyihuna wuu ka aqbalay arrintaa in sanadkan gudiisa ay tegaan Dalka Turkiga, si loo xoojiyo xiriirka labada dhinac” ayuu hadalkiisa ku daray Xoghayaha Guud ee Golaha Aqalka Sare.
Previous articleGuddoomiye Jawaari oo booqday xarunta Al Azhar Al Shariif “SAWIRRO”
Next articleIsu soo bax Nabadda lagu taageerayay oo ka dhacay Gaalkacyo “SAWIRRO”